Obbo Toleeraa Adabaa: Hidhannoo hiikkachuu irratti ejjennoon ABO maali? - BBC News Afaan Oromoo
Obbo Toleeraa Adabaa: Hidhannoo hiikkachuu irratti ejjennoon ABO maali?
Goodayyaa suuraa Obbo Toleeraa Adabaa, Dubbi Himaa ABO
Partilee karaa nagaan qabsaa'uuf biyyatti deebi'an keessaa dhimmi Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) hidhannoo hiikkachiisuu dhimma ijoo dubbii miidiyaalee idileefi kan hawwaasummaa tibba kanaa ture.
Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahimed dhimma kana irratti Roobii darbe gaaffii gaazexessitoonni biyya keessaa gaafataniif deebii kennaniin, " Dhimmi hidhannoo hiikkachiisuu waan nu yaaddessu miti," jedhan.
Dr. Abiy muddama bifa duulaatiin miidiyaalee hawwaasummaa irratti deemu dhaabuun barbaachisaa ta'uu himuun salphisanii tasgabeessanii ilaaluun gaarii akka ta'e dubbataniiru.
"ABOs ta'e paartileen biroo waliin walitti dhiyaannee mari'anna, waliinis ni hojjenna biyya biraa hin qabnu" jedhaniiru.
"Dhimmi hidhannoo hiikkachuu waan nu yaaddessu miti"
Obbo Toleeraa: Ejjennoon Adda Bilisummaa Oromoo dhimma kanarrattii qabsoo karaa nagaa itti fufudhaaf mootummaa waliin walta'ee itti seeneera.
Walii gala garuu waan hidhannoo hiikkachiisuu isa jedhu kanaa namoonni walta'insa ABO fi mootummaa gidduutti ta'eerratti hubannoo gahaa hin qabne ykn yeroo marii sana hin turretu akkuma itti fakkaatetti hiika itti kennaa jiru.
Kan inni qabsoo gochaa ture ammoo mirga uummataa kabachiisuuf waan ta'eef karaa akkamiin qabsoo isaa itti fufuun danda'ama kan jedhurratti mootummaa waliin haasawarra jirama.
Akka xumurameen ammoo uummataaf ibsama malee calluma jedhamee hiikkachiisuu hiikkachiisuu jechuun kun waan daandii isaarraa fagaate ykn walta'insa irraa fagaateetti hubanna nuti.
Kanaafii dhimmi kun mariirra jira waan ta'eef akkuma xumura argateen gam-lamaan ibsa barbaachisu kennu jechuudha.
BBC: Qondaalli mootummaa yeroo dubbatan marii Asmaraatti ta'e irratti dhimmi hidhannoo hiikkachiisuu kun dubbii ijoo hin turre jedhan. Erga biyya galtanii booda dhimma kana irratti waanti mootummaa waliin mariyattan ni jiraa? Eenyu waliin mariyattan?
Haa ta'u malee mootummaa waliin waan haasofne qabna. Innis xumura akka argateen waan ibsinu ta'aa jechuudha.
Marii mootummaan Asmaratti jila ABO waliin wal argee mariyaterratti kan ka'edha dhimmi kun. Dhimmi sunis gamuma kanaan xumura argata jennee yaadna.
BBC: Kanaafuu dhimmi hidhannoo hiikkachiisuu kun Asmaraatti ka'eera jechuudhaa?
Obbo Toleeraa: Eyyeen, akka gaariitti ka'eeraa irrattis mariyatameera.
Obbo Toleeraa: Mariin sun yeroo sanatti hin gudunfamne. Biyya akka seenameen kan xumura argatu ta'a jedhame.
Kaafamee haasa'ameera. Waraanni kun waraana uummataa ta'uu isaa irratti walhubannoorra ga'amee fuula duratti akkamittiin hammatamee qabsoo keessatti akkamitti itti fufuu danda'urratti marii gaggeeffamedha.
BBC: Erga biyya galtanii booda qaama mootummaa kam waliin mari'attan dhimma kana? Amma hin xumuramne jettan. Eenyu waliin mari'achaa jirtu?
Obbo Toleeraa: Kan dhimmi ilaalu yeroo sana jilli dhimmi kun yeroo sana waliin irratti haasa'amee Pirezedaantii MNO Obbo Lammaa Magarsaafi Ministira Haajaa Alaa Dr. Warqinaa Gabayyoo waliin haasa'ame.
BBC: Erga biyya galtanii booda hoo qaama mootummaa kam waliin mari'attan dhimma kana?
Obbo Toleeraa: Jilli ABO erga dhufee hojii adda addaatiin qabamee ballinaan irratti hin haasa'amnee beellamaan jirama.
BBC: Kanaafuu, dubbii keessanirraa kan hubatamee mootummaa waliin furuudhaaf hojjechaa akka jirtanidhaa gama kaaniin ammoo akka ko'oomachaa jirtanidha. Qaama mootummaa dhimmi kun ilaallatu waliin mari'achaa jirtuu, furuuf yaalaa jirtuu?
Obbo Toleeraa: Jilli ABO erga biyya seenee boodas irratti dubbatameera. Fuula duras irratti haasa'amee xumura ni argata.
Obbo Toleeraa: Akka waliigalaattii WBOn uummataafi qabsaa'aa ture, qabsaa'aas jira. Kanaafuu kan haala kanaan dirqama isaa itti fufuu barbaadu achi keessatti hammatamee akka itti fufu barbanna.
Kaan ammoo akkuma ogummaafi dandeettii isaatti hojii adda addaa irratti bobba'ee gama dhaabaatiinis haata'u dhuunfaadhaan hojii argatee akka ittiin jiraatu yaada qabna jechaadha.
Kanaaf, isa kana akkamiin hammachiifnee fuula duraatti akkamiin jiraachisuun danda'amaadha malee calluma jedhamee hidhannoon irraa fuudhamee gali jedhamee gaggeeffamu miti.
Akka waraanaatti itti fufuu danda'u ykn caasaa mootummaa keessatti kanneen hirmaachuu danda'an akkaataa itti hirmaachuu dand'an haalli akka mijeeffamuuf ni gaafanna.
BBC: Dimma mootummaan Roobii darbe ibsa kenne yoo waraanni sun hiikkachuudhaa baate ofiin hiikkachiifna jedhe irratti waanti isin gochuuf deemtan waan waraana sanaaf malu mootummaa waliin mari'attanii furmaata irra gahuuf akka yaada qabdani kanan hubadhe. Kanuma mitii?
Humni kun biyyichaafis uummataafis barbaachisaadha jennee amanna. Kanaafuu, akkaataa ittiin hammatamuun danda'amurratti hojjetamaa jira.
Adda Bilisummaa Oromoo: ''Waraana dhaabne malee hin hiikkachiisne''